DF Somalia oo Hal milyan ugu deeqday dhibaatadii ka dhacday Qardho | Xaysimo
Home War DF Somalia oo Hal milyan ugu deeqday dhibaatadii ka dhacday Qardho
DF Somalia oo Hal milyan ugu deeqday dhibaatadii ka dhacday Qardho
Dowladda Federalka Somaliya ayaa lacag dhan Hal Milyan oo doolarka Mareykanka waxa ay ugu deeqday Maamulka Puntland, gaar ahaan fatahaada ka dhacday Magaalada Qardho.
Wasiirka Maaliyadda Puntland, Xasan Shire Cabdi, ayaa xaqiijiyey in ay gudoomeen aduun lacageed dhan hal milyan oo Doolar oo ka timid xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya.
Mr Xasan oo u waramay warbaahinta ayaa daboolka ka qaadey in lacagtaas oo lagu shubay akoonka dowladda loogu talagalay siddii loogu gargaari lahaa shacabka ku ceeyroobay daadadkii Qardho.
Isagoo hadalkiisa sii wata, wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in lacagtaas lagu wareejin doono mid kamid ah akoonadda laga furay Bangiyadda gaarka loo leeyahay ee loo sameeyay gurmadka xarunta Karkaar.
“Waxaan uga mahadcelineynaa dowladda federaalka lacagtaas ay nasoo gaarsiisay, in ka badan waan fileynaa in ay nasoo gaarsiin doonto,” ayuu hadalkiisa kusii daray wasiirka Maaliyadda Puntland.
Dhanka kale, qoraal kooban oo kasoo baxay xafiiska ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa looga faaloodey lacagta loogu gurmanayo magaalada taariikhiga ah ee Qardho.
“Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta Dowlad Goboleedka Puntland gaarsiisay lacag dhan $1,000,000 (Hal Milyan oo Doolar) oo loogu talo galay gurmadka dadka ay saameeyeen daadadka magaalada taariikhiga ah ee Qardho,” ayaa lagu yiri.
Inkastoo hadda xaaladda Magaalada Qardho ay tahay mid soo hagaageysa, kadib daadadkii ku dhuftay Magaalada, haddana Bulshadii ku khasaartay daadadka ayaa u baahan xaalad gurmad muuqda.
Inta la xaqiijiyay daadadkii habeen hore ku rogmaday Xaafadaha Magaalada Qardho ayaa waxaa ku geeriyooday 6 Ruux halka ay ku hanti beeleen Boqolaal qoys sida ay sheegeen mas’uuliyiinta degmada Qardho.
Shacabka Somaliyed ayaa u istaagay muujinta Kaalinta gurmadka shacabka reer Qardho ee maanta u baahan caawinta walaalahooda Soomaaliyeed.
47 ka mid ah xildhibaanada DIR oo soo saaray go’aan ka...
Sheekh Maxamed Idiris oo musharaxiinta mucaaradka ku sifeeyay kuwa huwan calanka...
Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka oo sheegay hadal dhabarjab ku ah...
Gudaha Aqalka Cad kaddib guuldarradii Trump
Muxuu Faarax Macallin ka yiri go’aankii ay DF Somalia ku ceyrisay...
Midowga musharaxiinta oo war ka soo saaray go’aankii ay DF ka...
DF oo shaacisay tirada Shabaab looga dilay dagaalkii ay shalay kula...
Cilad ku timid diyaarad ay la socdeen masuuliyiin ka tirsan HirShabelle
RW Abiy Axmed oo eedeymo culus u jeediyey hoggaankii TPLF ee...
Ciidamada ammaanka DF oo toogasho ku dilay nin qarax ku aasayey...